မွန်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်
နိုင်ပန်းလှကို ၁၂၈၄ - ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၄- ရက်၊ အင်္ဂါနေ့( ၂၀-၃-၁၉၂၃ )နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ် ဂျိုင်းမြစ်ကမ်းပေါ်ရှိ ကော့ဗိန်း(အိုးသည်ကုန်း)ရွာ၌ ရွာသူကြီး ဦးကြွနှင့် ဒေါ်ချိုတို့မှ ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်း ၇ ဦးအနက် စတုတ္ထမြောက် သား ဖြစ်သည်။
B.Sc., Ph.D., LLD.
(1923-03-20)မတ် ၂၀၊ ၁၉၂၃
ကော့ဗိန်း၊ ဂျိုင်းမြစ်ကမ်း၊ ကရင်ပြည်နယ်
ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၀(2010-06-18) (အသက် ၈၇)
ကရင် ကေဘီအမ် အထက၊ မော်လမြိုင်
Pacific Western တက္ကသိုလ်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့
ပါမောက္ခ၊ မွန်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု၊ ဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ် (၁၉၈၈)
အမြဲတမ်းပါမောက္ခ၊ မေယိုတက္ကသိုလ်၊ ဂျပန် (၁၉၉၄)
ခေတ်ဟောင်းနှင့် ခေတ်သစ် မွန်စာပေနှင့် ကျောက်စာ c
ယဉ်ကျေးမှု မနုဿဗေဒ B.Sc., Ph.D. (၁၉၉၁)
ဥပဒေပါရဂူ LL.D. (၁၉၉၂)
မွေးချင်း ၇ ဦး
အကျိုးဆောင် အတွင်းရေးမှူး၊ ရာမညမွန်အသင်းချုပ်
၁၉၄၆ – .
မွန်ယဉ်ကျေးမှု အထက်တန်းအရာရှိ၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၁၉၅၃ – ၁၉၈၆
၁၉၈၈ – .
၁၉၉၄ – .
သမိုင်းနှင့် မွန်-မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပညာရှင် ဒေါက်တာ နိုင်ပန်းလှသည် ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၁၀ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် လေဖြတ်ထားသည့် ဒဏ်ဖြင့် ကွယ်လွန်သွားသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၈၈ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။ 
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်ပန်းလှ&oldid=696314" မှ ရယူရန်
၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။